MUQDISHO, Soomaaliya - Wararka laga helayo gobolka Jubbada Dhexe ayaa sheegaya in Duqeyn dhanka cirka ay xalay diyaarado dagaal ka fuliyeen degmada Jilib, oo ay maamusho Kooxda Al Shabaab.
Warbaahinta dowladda ayaa baahisay war ku saabsan in duqeynta lagu burburiyay xarun ay Jilib ku lahayd Idaacadda afka Al-Shabaab ku hadasha ee Andalus, taasoo laga dhageysto goobaha kooxda ay gacanta ku hayso ee Koonfurta Soomaaliya.
Shaqaalihii ku sugnaa dhisamaha Idaacadda Andalus ayay Wakaaladda Wararka dowladda Federaalka sheegtay inay ku dhinteen weerarka, inkastoo aysan baahin magacyadooda.
Lama oga dalka laga leeyahay diyaaradaha duqeynta geystay, balse waxaa xusida mudan in Mareykanka looga bartay weerarada noocan ah ee ka dhaca dalka, iyadoo sidoo kale militeriga Kenya ay mararka qaar Al-Shabaab ku weeraraan diyaarado.
Al-Shabaab wali kama aysan hadlin warka ku saabsan duqeynta Jilib iyo burburinta Idaacadda Andalus, oo markeedii hore laga raray magaalooyin badan markii Kooxda lagala wareegay.
Mareykanka oo duqeyn diyaaradeed ka fuliyay Somalia
Soomaliya 25.01.2019. 00:50
Trump ayaa bixiyay amarka lagu kordhiyay weerarada duqeymaha ah ee Somalia.
Mareykanka oo Howlgal ka ka fuliyay Soomaaliya
Soomaliya 28.02.2018. 12:50
Al-Shabaab oo Saraakiil loogu dilay Duqeyn ka dhacday Jubbada Dhexe
Soomaliya 25.11.2018. 16:42
Ciidamada AMISOM oo billaabay ka bixitaanka Soomaaliya
Soomaliya 07.12.2017. 14:40
Al Shabaab oo xubno sare looga dilay Duqeyn ka dhacday Jubbada Dhexe
Soomaliya 06.04.2018. 18:12
Mareykanka oo howlgal ka fuliyay Jubbada Dhexe [Fahfaahin]
Soomaliya 29.06.2018. 20:09